Filomena na-ekpofu mmiri kachasị njọ na Madrid kemgbe 1971
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Spain » Filomena na-ekpofu mmiri kachasị njọ na Madrid kemgbe 1971
Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • Rail njem • Safety • Akụkọ na -agbasa na Spain • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
11 min gụọ
A maara Spain maka anwụ, ụsọ osimiri na ọmarịcha igwe na-acha anụnụ anụnụ.
Taa Filomena gbanwere ọnọdụ a ka ọ bụrụ awa 30 nke ọdịda mmiri. Ọ bụ snowstorm Madrid ahụbeghị afọ 50. Madrid ga-emechi ọdụ ụgbọ elu ma kwụsị ọrụ ụgbọ okporo ígwè
Spain Filomena etukwasilarị ya ihe ruru awa iri atọ nke snow na ọ bụ oke mmiri mmiri kacha mkpa na afọ 30 gara aga. Obodo Madrid bụ otu n'ime ebe kachasị emetụta. A mara ọkwa oké ifufe ahụ ụbọchị ole na ole gara aga na amụma ihu igwe nke mba na-adọ aka ná ntị banyere ụdị bọmbụ snow na-agbadata na Madrid na Central Spain, mana ọ bịarutere ọbụna njọ karịa ka ekwuru. Eze Felipe akwụsịla nzukọ niile na Mọnde na Tuesday.
Oké mmiri ozuzo ahụ amanye mmechi nke Madrid Barajas Airport na ịkagbu ọrụ ụgbọ okporo ígwè dum, ma e wezụga METRO na obodo Madrid. Mmechi nke Adolfo Suárez Madrid-Barajas Airport ga-aga ruo elekere 2300 na Satọde a, Jenụwarị 9, 2021.
Renfe, ụgbọ oloko ndị Spain, kwupụtara nkwusioru ụbọchị niile nke ọrụ ụgbọ okporo ígwè ya niile na-aga na Madrid n'ihi oke snowfall na oke snow na-aga n'okporo ụzọ. Nkwụsịtụ ahụ na-emetụta ọrụ nke AVE, ụgbọ oloko dị ogologo na nke ọkara, yana ọrụ Cercanías nke isi obodo.
Onye isi obodo Madrid, José Luis Martínez Almeida, kwuru na n'isi obodo niile nchịkọta snow bụ ihe dị ka ọkara mita na ụfọdụ ebe na karịa 60 centimeters na mpaghara ụfọdụ. Ọ bụ ọnọdụ dị oke njọ ebe ọ rịọrọ ndị MADRILENOS ka ha ghara ịpụ n'okporo ámá. “Ebe ahụ mara mma ma dị ize ndụ. Ọ bụghị egwuregwu, ọ dị egwu, ”ka Onye isi obodo ahụ kwughachiri na TV Channel Onda Madrid.
Ndị isi obodo Madrid ga-enye ndị mmadụ tọrọ atọ n'okporo ụzọ ụlọ nkwari akụ
Onye isi obodo Martinez -Almeida kwuputara taa na ọ na-emechi nkwekọrịta ya na ụlọ oriri na ọ hotelsụ inụ na isi obodo ka ndị mmadụ tọrọ n'ime snow n'okporo ụzọ nnweta Madrid nwere ike ịbịakwute ha wee zuo ike. Okporo ụzọ 659 niile Spain na-egbochi kpam kpam n'ihi oke snowfall.
Ugbu a, ha na-arụ ọrụ ịhapụ ndị ọkwọ ụgbọala niile tọrọ atọ. A na-atụ anya na Snowfalls ga-akwụsị n’etiti ehihie ma bido ikpochapụ ụzọ ndị bụ isi nke snow. Ka ọ dị ugbu a, a napụtala ihe karịrị ụgbọ ala 1,500 na Madrid n'ime ụbọchị abụọ, ka EL MUNDO na-akọ.
Statelọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ihu Igwe (AEMET) nke dị na obodo Madrid dọrọ aka na ntị na mgbe Philomena na ebili mmiri ga-emetụta peninshula na oke okpomọkụ na-agbada dị ka obere 12 CEL ma ọ bụ karịa ABC.
Mịnịsta na-ahụ maka ụgbọ njem, José Luis Abalos, achọpụtala oke oke ifufe ahụ butere Filomena Na-ekwu na channel 24h taa "oke ịtụnanya ahụ juru anyị niile anya."
Banyere ọnọdụ dị na ọdụ ụgbọ elu Madrid Barajas nke kwụsịrị ọrụ ya niile na Satọde a, Mịnịsta nke Transportgbọ njem, José Luis Abalos, kwuru na ọ na-anwa "ịchekwa ụfọdụ ụzọ ụgbọ elu na-eme ka ọdụ ụgbọ elu ahụ nwee ike iji" n'agbanyeghị na o kwupụtara "taa ọ ga-eme gbagwojuru anya kwuru na njem a ga-akwụsịtụ. N’abalị, a rụrụ ọrụ na ịhapụ ụzọ runway na-emeghe iji gbochie ọpụpụ ole na ole ka a gbanwere. Ka ọ dị ugbu a, ndị njem nọrọ na Terminal 4 na Terminal 1 a na-enye ndị ọzọ ebe obibi. ”
Ndị mmadụ na-arapara n'ụgbọ ala ha ruo ihe karịrị awa iri na abụọ ruo iri na anọ n'enweghị enyemaka ọ bụla. Ọtụtụ n'ime ha ga-arahụ n'ụgbọ ala ha ma nọrọ n'ụgbọala ha ma ọ bụ hapụ ntakịrị mmanụ ala na-atụ anya ịkwaga ọzọ.
Ski Resorts dị nso na Madrid kwupụtara n'elekere itoolu nke ụtụtụ Satọdee na enweghị ebe ị na-adọba ụgbọala dị - ọtụtụ ndị na-agba mmiri họọrọ ịga ski na n'okporo ámá ndị Madrid.
Enyi a na-ede akwụkwọ bi na mpụga Madrid ka enweghị ọkụ eletrik ruo ọtụtụ awa n'abalị ụnyaahụ, ọ pụghị imeghe ọnụ ụzọ n'ihi na o nwere mita 1 nke snow na mpụga na otu igbe igbe dị n'èzí.
Ma enwekwara akụkọ ifo nke na-abịa na akụkọ Snow White a n'ụdị nwa agbọghọ aha ya bụ Clara onye amụrụ n'ime ụgbọ ala n'etiti oke ifufe ahụ. Di na nwunye a na-eche ụgbọ ihe mberede ruo ọtụtụ awa wee kpebie ịla ụgbọ ala mgbe nwanyị ahụ malitere ime ime. Ọ mụrụ nwa agbọghọ dị arọ 3.2 tupu a kpọga ya ụlọ ọgwụ Carlos III dị nso n'agbanyeghị agbanyeghị usoro ọmụmụ. Ndị ọrụ ụlọ ọgwụ na-arụ ọrụ mgbanwe 3 n'otu oge n'ihi na enweghị mgbanwe ọ bụla enwere ike ugbu a, ọ nweghịkwa ọgwụ na-enye ọgwụ n'ụlọ ọgwụ.
Site na elekere asatọ nke ụnyaahụ ruo taa na 8 nke ụtụtụ, Samur-PC na ndị ọkụ ọkụ nke obodo Madrid emeela ihe karịrị 12 na-arụ ọrụ ugbu a ma na-achịkwazi 600. El Corte Inglés - ngalaba kachasị ukwuu nke Spains - agaghị emeghe Satọde a na Madrid ma ọ bụ kama na-emekọ ihe ọnụ maka ikesa nri ndị mmadụ tọrọ atọ. Lọ akwụkwọ na mahadum dị na Madrid ga-emechi emechi na Mọnde na Tuesday.
Enyemaka Ndị Agha na Isi Obodo
Almeida, onye isi obodo Madrid kwuru, bụ onye rịọrọ ndị agha ka ha soro ndị otu City Council rụwa ọrụ "Akpọrọ m Margarita Robles, Mịnịsta Nchekwa, ajụkwala m ya maka enyemaka nke ndị agha ọfụma na ọrụ a." ozugbo enwere ike site na mgbe ọ kwụsịrị snowing iji kpochapụ ụzọ nke obodo ahụ.
Onye Minista ahụ kwuru na ọ ga-eme ike ya niile iji tinye ndị agha na akụrụngwa n'ihu, dị ka Almeida si kwuo bụ onye dọrọ aka na ntị na obere ọnọdụ a na-atụ anya ala maka ụbọchị ole na ole sochirinụ na opekempe nke ogo 12 n'okpuru efu, ọnọdụ ahụ nwere ike ịka njọ na n'ọnọdụ ọ bụla Ikpocha okporo ụzọ na n'okporo ámá "ga-abụ usoro ga-ewe ọtụtụ ụbọchị."
Oké ifufe ahụ emeela ka osimiri gbawaa n'akụkụ ha na-akpata ọnwụ anọ nke a na-akọ ugbu a n'ihi Filomena. Ndị ọrụ gọọmentị kwuru na achọtala mmadụ abụọ oyi kpụkọrọ - otu na obodo Zarzalejo, northwest nke Madrid, na onye nke ọzọ na obodo ọwụwa anyanwụ nke Calatayud. Ide mmiri butere mmadụ abụọ na-eme njem n'ụgbọ ala na nso obodo Malaga nke dị na ndịda.
Ndị Nche Obodo na Red Cross na-eje ozi gwongworo 400 tọrọ atọ na Valencia
Ihe karịrị ndị ọrụ nchekwa 100 Civil Guard na ndị ọrụ 230 arụ ọrụ kemgbe awa 24 gara aga - 33 n'abalị ụnyaahụ - iji jere ozi, yana ndị Red Cross, ndị ọkwọ ụgbọ mmiri nke ifufe ahụ jidere na ụmụ amaala nke obodo ndị emetụtara.
Ministri nke Omenala mechiri ụlọ ihe nkiri na ebe ngosi ihe mgbe ochie na Madrid, Castilla-La Mancha, na Extremadura. Ministri nke Omenala na Egwuregwu ekwuputala ịkagbu ọrụ ndị ezubere maka ngwụcha izu na Jenụwarị 9 na 10 na mbara ihu nke National Institute of Performing Arts and Music (INAEM) na Madrid, yana imechi ụlọ ngosi ihe mgbe ochie na Madrid, Castilla-La Mancha na Extremadura, na ọnọdụ nke ọnọdụ snow kpatara iji mee ka nchekwa nke ndị ọrụ ya. Kpụrụ ahụ na-emetụtakwa Ọbá Akwụkwọ Mba nke Spain na Ọbá Akwụkwọ Ihe Nkiri nke Spanish, akụkọ Europe Press.
Ihe karịrị ezinụlọ 27,000 na Albacete, Cuenca, Guadalajara, na Toledo enweghị ọkụ. Ihe karịrị otu narị okporo ụzọ snow na ice emetụta na Castile na León, nke kachasị na nke abụọ na netwọkụ nke abụọ na Castilla y León.
Aragon, Castilla-La Mancha, Catalonia, Madrid, na Valencia nọ n'oké ihe ize ndụ (ịdọ aka ná ntị uhie) maka snowfall na Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Navarra, Basque Country, na La Rioja dị oke egwu (odo) maka otu ihe ahụ . Enwekwara ịdọ aka na ntị banyere oke mmiri ozuzo n'ụsọ oké osimiri na obere okpomọkụ na Spain.
Amụma ihu igwe na-egosi na Filomena ga-agagharị n'ebe ugwu ọwụwa anyanwụ na Sọnde, nke ga-apụta na ọ ga-ebelata snowfall ọ bụ ezie na ọnọdụ okpomọkụ ga-adị oke ala. Agbanyeghị, ọtụtụ ndị ga-ahapụ n'oge oyi ka ụgwọ ọkụ latrik na-amụba okpukpu abụọ kemgbe ụnyaahụ.
Aragon, Castilla-La Mancha, Catalonia, Madrid, na Valencia nọ n'oké ihe ize ndụ (ịdọ aka ná ntị uhie) maka snowfall na Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Navarra, Basque Country, na La Rioja dị oke egwu (odo) maka otu ihe ahụ . E nwekwara ịdọ aka ná ntị banyere mmiri ozuzo, ifufe, ihe ndị dị n'ụsọ oké osimiri, na ọnọdụ okpomọkụ dị ala na Spain.
Somefọdụ puku gwongworo na Catalonia na otu 2,000 na Aragon kwụrụ
Somefọdụ gwongworo 2,000 ka na-agazighị ebugharị n'ihi mgbochi nke oke mmiri ozuzo na mpaghara ọrụ ụzọ ụzọ Catalan, ọkachasị na La Jonquera (Girona) ebe enwere otu puku mmadụ amalitelarị ịpụ na France iji zere ọgba aghara snow.
Enyerela ntaramahụhụ karịrị 200 na ndị ọkwọ ụgbọ ala ndị tufuru mmachibido iwu maka ịnya ụgbọ ala karịa 7.5 tọn yana iwu dị ike ruo 0600 na Mọnde ma ọ bụrụ na amụma ihu igwe adịghị emeziwanye.
Na Sant Bartomeu del Grau (Barcelona) na Lleida, a napụtara ndị ọkwọ ụgbọ ala na ọnọdụ okpomọkụ nke mwepu 25 Celsius. N’okporo ụzọ Aragon, ihe fọrọ obere ka ọ bụrụ gwongworo 1,400 ka snow na-egbochi.
N'ọnọdụ ọ bụla, isi mmalite nke gọọmentị mpaghara ahụ nke Europa Press nyochara mere ka ọ bụrụ na ihe kacha mkpa bụ iji hụ na ndị Castald niile na-ahụ maka ahụike na ụlọ ọgwụ yana na ịchekwa atụmatụ ịgba ọgwụ mgbochi nke coronavirus.
The snow na ice e dere na-adịbeghị anya awa emetụta karịrị 100 ụzọ, ọtụtụ nke abụọ netwọk, na Castilla y León, dị ka data nyochakwara Efe a Saturday na website nke Directorate General of Traffic (DGT). Mpaghara mpaghara nke Avila, Soria. na Burgos ewerewo ọtụtụ ụzọ dị ka o kwere mee, ọ bụ ezie na ihe isi ike ndị ahụ lekwasịkwara anya n'okporo ụzọ dị na Segovia, Salamanca, Valladolid, na Soria. Nchịkọta ụzọ 32 metụtara n'oge a dị na mpaghara Avila, 23 na Burgos, 18 na Soria, ụzọ iri na Segovia, Valladolid na León, asatọ na Salamanca, na abụọ na Palencia.